डन Quixote को छवि: सबै भन्दा राम्रो मनसाय र मानिसको आकांक्षाओं को प्रकटीकरण
जीवन जस्तै डन Quixote बारेमा व्यंग्यात्मक उपन्यास धेरै हास्यास्पद छ। होइन, साँच्चै - यो काम भयो जनसंचार भ्रम व्याख्या कसरी अरू गर्न? डन Quixote को अनन्त छवि XXI सताब्दी मा, अब पनि मन stirs। मान्छे किन यस्तो pernicious अर्थहीन, यो मानवतावाद को एक मोडेल छ बनाएको के रहस्य छ? बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
कस्तो दुःखलाग्दो कथा
एक व्यङ्ग्य र खुट्टाोडी रूपमा विशुद्ध लिखित, काम शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपन्यास हुन्छ; सबैलाई यो एक गहिरो रूपमा लेखिएको दार्शनिक दृष्टान्त। एक सपनाहरु देखने, क्रान्तिकारी, altruist एक मोडेल बन्ने, एक निरर्थक, तर अझै पनि नकारात्मक चरित्र रूपमा गर्भधारण Cervantes जो नायक,; यो सबै visionaries र सजिलो सहयात्रा मान्छे, लेखक आफूलाई सहित जोडेको घरमा फेला सबै सुविधाहरू को डन Quixote भरियो। को protagonist उपग्रह, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र Sancho, धन अश्लील किसान को सपना जो राष्ट्रको प्रतीक र यसको अनन्त बुद्धि परिवर्तन गरिएको छ।
त्यसैले, आफ्नो सम्पत्ति मा एक वृद्ध nobleman Alonso keha घर छ। आफ्ना सबै स्पेयर समय उहाँले पढेर बिताउँछन् , romances chivalry को संस्थाले एक सय वर्ष पहिले गायब थियो हुनत। केही बिन्दुमा तिनले पुस्तकहरू सामना गर्यो ती सबै आदर्श लागि आफ्नो जीवन दिन तयार छ भनेर बुझ्छ। उहाँले नाइट बन्न निर्णय गर्छ।
, Rocinante समझदार प्राप्त, तर पैसा बारेमा सपना Sancho Panza नाम जागीरदार - Keha घोडा (बस पुरानो मलबे रूपमा उहाँले जस्तै) भेट्टाउनुहुन्छ। नाइट, हृदय को एक महिला पाता र आफूलाई एक शानदार "डन Quixote" कल, आफ्नो कामहरू गर्न पठाइएको छ।
त्यो केवल यी साहसिक कार्य हास्यास्पद र पागलपन को पूर्ण छ: को साथ युद्धमा वायुघट्टहरू, दिग्गज, - "। निष्ठुर डाँकुहरूको" भूत भिक्षुहरूले मा आक्रमण, "उद्धार" आफ्नो दासहरूले देखि एक केटी
Sancho द्वारा गढा शीर्षक बावजुद, "डन Quixote, को उदास Countenance को नाइट", यात्री गिल्ला मात्र वस्तुहरू छन्। मुख्य युक्तिहरूको तिनीहरूले विद्यार्थी शिमशोनलाई Carrasco निर्माण। उपन्यास को दोस्रो तेस्रो, उहाँले जो उहाँले एक खलनायक दुष्ट कथन रूपमा सिर्जना Duel, समयमा हाम्रो नायक पराजित भएको थियो। यो त अब उहाँले बदला लिन चाहन्छ, जवान को भावना चोट गर्नुपर्छ।
प्ले डन Quixote अघि कि प्ले सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी podnachivat आचरण - तिनीहरूले मजा छन्, र उसलाई न्याय गर्छन्। यस महिना को एक नाइट संग लडाई छ (समय सिंहहरूका नाइट द्वारा), एक हजार indignities, आफैले imperceptible मार्फत गएका भएको उदास Countenance को नाइट को अदालत मा - र हराउछ। शिमशोन द्वारा - कवच विजेता हो। यसलाई आफ्नो यात्रा र यात्राको त्याग्न डन Quixote देखि आवश्यक छ।
फलस्वरूप, पुरानो मानिस चुपचाप ओछ्यानमा मर रहेको छ। उहाँले त्यो मूर्खता प्रतिबद्ध थाह - तर म त्यो गरे निश्चित छु राम्रो व्यक्ति, कि डन Quixote को छवि - एक गाढा संसारमा उज्ज्वल स्थान। समय द्वारा उहाँले विश्वासी जागीरदार Sancho द्वारा लाग्यौं रोइरहेका सेवकहरू मात्र उहाँले, तर पनि सोच्छ।
Cervantes 'उपन्यास मा डन Quixote को छवि, यसलाई मूल yumoristichen थियो। लेखकले स्वयम्ले "उच्च", psevdopafosnoy आफ्ना समकालीनहरूको समतल भर जो साहित्य को एक तोड सिर्जना गर्न बताए।
र आफ्नो उपन्यास उहाँले सबैभन्दा नीच र mundane बनाउन प्रयास किनभने, "picaresque" तथाकथित। र सुरुमा उहाँले कथित थियो। उपन्यास को स्पेन सारा हाँसेको थियो मा - डन Quixote को सुविधा छवि unequivocal दिइएको थियो।
समय तथापि, Cervantes को मृत्यु पछि, मान्छे को मन मा छविको नयाँ व्याख्या जन्म। र यसका सबै दर्शन भएको नाइट गुमराह वर्ण मा जो फेला जर्मन Romantics, दोष। तिनीहरूलाई लागि, डन Quixote फोहोर यथार्थवाद को दुनिया मा काल्पनिक प्राण tossing थाले।
यो विचार, भरने, विश्व र बाहिर विकसित। र अब Turgenev डन Quixote Hamlet एक बराबरीको मा, विचार को नाम मा लड्न आफ्नो इच्छा प्रशंसा राख्छ।
को XX सताब्दी पहिले नै, यो उदास Countenance को नाइट को तर्क जारी छ। संसारको यसको सम्बन्ध को समस्या मात्र छैन दार्शनिकहरू र लेखकहरूले, तर पनि मनोवैज्ञानिक, को रोचक कुराहरू धेरै "kihotstve" मा स्थित बाहिर बोल्न गर्न इच्छुक छन्।
र अहिले सम्म, हरेक वर्ष डन Quixote हाम्रो आँखा यसको हास्य र उत्साह, एक दुःखद र गलत समझ बैठी आंकडा मा थप र थप खोल्दै हराउछ।
विश्व साहित्य मा प्रभाव
डन Quixote - साहित्य मा अनन्त छवि, र यो Cervantes को मुख्य उपलब्धि हो। अनजानमा, त्यो संसार धेरै हास्यास्पद Eccentric, त्यसैले आवश्यक छ जो दिनुभयो। यो पुस्तक मा Cervantes "savages" हाम्रो कर्तव्य हो , यस ज्योतिको कम्पनी बाट अलग वा फरक दृश्य नकारात्मक भएनन् गर्दा। सोही, डन Quixote को यो तस्बिर मा काम मा Dostoevsky लागि प्रेरणा रूपमा सेवा "द बेवकूफ।"
तर कुनै कम महत्त्वपूर्ण प्रारूप मा उपन्यास को साहित्यिक संसारमा ल्याए जो लेखक रूपमा Cervantes को गुण जो हामी अब थाहा छ। उहाँलाई धन्यवाद, पुस्तक लामो इतिहास, रेखा को धेरै र वर्ण को जीवनमा बलियो परिवर्तन संग एक उत्पादन भयो।
डन Quixote को छवि अनन्त यात्री को विचार रूपमा - पहिलो, यो सबै भन्दा बाहिरको प्रतीकात्मक विकल्प विचार लायक छ। यो एक मानिस जसको जीवन छ सडक जोडिएको हुन छ। बस कुनै अन्य तरिका हो। र सबै भन्दा चाखलाग्दो कुरा, मानिस "bookworm" बाट बढ्छ।
र उहाँले आफैलाई झूट थियो र छल्न छैन। उहाँलाई लागि, deprivation र बाटोमा समस्या र साँचो आनन्द हो। र डन Quixote आफूलाई यो ध्यान केंद्रित छ, यसलाई याद। एउटै romances थिए किनभने उहाँले कठिनाइहरू पनि खुसी थियो।
तिनीहरूले एक कृति "डन Quixote" पढ्ने, रोमान्स हेर्न? काम विश्लेषण protagonist आफ्नो भित्री दुनिया coincides कसरी नराम्ररी छलफलको सुरु। तिनीहरूलाई लागि नै हो किनभने नाइट को छवि दर्शन अभिन्न भाग हो। र त्यसपछि "तरवार नायक र ढाल" पनि अस्वीकार गलत बुझयो, समाज बाट banished।
के रोमान्टिक छ अप छवि हाल झण्डा मा उठाउन! आखिर, तिनीहरूलाई हरेक एक सपना को दुनिया विश्वस्त - साँच्चै वास्तविक र आफ्नै कल्पना भावना संग मिश्रित केहि माथि राख्नु पर्दछ। वास्तविकता को अनुहार मा एक थुक्नु - - लड्न डन Quixote कठोर फोहोर र कुनै न कुनै; यो सामान्य राम्रो नाम मा windmills संग लडाई छ। यो पूर्व-हराएको युद्ध, तर तपाईं वास्तवमा प्रेरित हुनुपर्छ को उदास Countenance को मृत्यु नाइट खुसी कि!
तथापि, डन Quixote को अनन्त छवि मात्र रोमान्स छ र केवल यी दुई कोमल मानिसको मामलामा यात्रा। तपाईं Cervantes एक नायक र पनि शक्ति हेर्न भने सबै पछि, प्रश्न अन्य पक्ष बाट, नजिक हुन सक्नुहुन्छ।
हो, यो कमजोर र पुरानो सपनाहरु देखने मा। आफ्नो जीवित अनन्त साहस को बीचमा, र सायद, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, डन Quixote chivalry को सिकेका छ। सम्झना, उहाँले एक पटक whined, moaned, कराए? योद्धाहरूले भटक को आचरण बारे कथाहरू देखि डन Quixote सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिए।
र उसलाई गलत आदर्श गरौं र उहाँलाई पागल गरौं, तर डन Quixote को छवि यसलाई सधैंभरि आफ्नो आदर्श लागि लड्न अटूट इच्छा, masculinity र बल मा shrouded गरिनेछ। उहाँले एक क्रांतिकारी जीवनको आफ्नो बाटो खातिर अन्त्य सम्म लड्न सक्षम सहित।
सबै अरू माथि स्वतन्त्रता
उपन्यास मा एक महत्वपूर्ण विषय ज्योतिका यूरोप फेला परेन। तिनीहरूलाई लागि, समस्या को उत्पादन नयाँ पेंट्स खेल्न थाले।
कि समय को दार्शनिकहरू र लेखकहरूले छैन स्वतन्त्रता माथि केहि गरिन् तथ्यलाई। तिनीहरूलाई लागि, यो मुख्य मान, आनन्द को मूल्यांकन लागि मुख्य मापदण्ड थियो। र, नाम अवधिको धेरै सुझाव रूपमा, तिनीहरूले नयाँ ज्ञान को रूपरेखा मा स्वतन्त्रता को निपटान बाध्य थिए।
यो दृष्टिकोणबाट, र तिनीहरूले डन Quixote देख्यो कि, भन्न अनावश्यक। सधैंभरि नाइट गुमराह, र कुनै पनि सीमाहरु द्वारा unfettered सत्यको खोजी गर्ने, शाब्दिक एक godsend तिनीहरूलाई लागि थियो। उहाँले तुरुन्तै व्यक्त गर्ने अधिकार लागि मर्न घोषणा गरेको थियो मानिस, को स्वतन्त्रता को मूर्ख र uncomprehending समाजलाई विरोध छ जो।
यो नायक (डन Quixote) को ज्ञानोदय छवि थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद दुःखद घटना र detachment एक आभा मा enveloped थियो, अहिले सम्म उहाँले अझै पनि एक हास्य वर्ण रूपमा देखेको छ, जबकि। र तपाईं सम्बन्ध Knights र squires Sancho सम्झौता भने, तपाईं पनि अधिक गहिरो र रोचक सिद्धान्त पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
प्राण र मन को झडप
तर, नायक को छवि, जानिन्छ, हरेक महान हुनुपर्छ जसले आफ्ना विश्वासी मित्र, बिना हुन पूरा हुनेछ साहित्यिक अक्षर। यहाँ जागीरदार Sancho Panza को भटक lunatic गर्न नयाँ रुप दिन्छ।
सँगै तिनीहरूले प्राण र मन को एक dualistic प्रतीक सिर्जना गर्नुहोस्। Rationalism Sancho, यो अचाक्ली को शारीरिक डन Quixote द्वारा मारा गर्नुपर्छ, जस्तो थियो। तर वास्तवमा तिनीहरूले साँचो मित्र को बलियो संघ सिर्जना गर्नुहोस्। किन त Cervantes दुवै वर्ण, जीवनमा हामी प्राण र मन को भीषण घृणा संग पूरा गर्दा पठाएमा छ?
र को रहस्य को छ - दुवै पक्ष स्वतन्त्र छन्। होइन, प्रत्येक अन्य बाट, छैन सबै - तिनीहरूले रिमोट वरिपरि मानिसहरूको राय छन्। डन Quixote र Sancho जहाँ सँगै तिनीहरूले अनुरूप छन् संसारमा।
यसलाई मा, र ज्योतिको रोचक thinkers फेला परेन। तिनीहरूलाई लागि, मन र आत्मा को आपसी coexistence को विचार धेरै दार्शनिक समस्या सम्बोधन गर्न सेट गरिएको छ। र वास्तविक जीवनमा, तिनीहरूले किनभने बाह्य कारक को बंधन को अनुरूप हुन सक्दैन।
Antagonistic शिमशोनलाई Carrasco
तपाईं के आवश्यक मानिसहरूले उहाँको मित्र मा हेर्न जान्न चाहनुहुन्छ भने। धेरै शत्रुलाई बताउनुहोस्। यहाँ, छवि Carrasco पूर्णतया डन Quixote वर्णन गर्दछ। , द्घेष प्रतिशोधी र mocking विद्यार्थी यो वास्तवमा छ भन्दा पनि कम छ उदास Countenance को नाइट विपरीत देखिन्छ।
को protagonist धेरै हानि गर्न आफ्नो इच्छा, आफ्नो खराब स्वभाव डन Quixote को आचरण हाम्रो लागि जोड। किनभने अन्त मा, शिमशोन आफूलाई दिइएको परिस्थितिमा flirted र protagonist को गाढा प्रतिबिम्ब एक प्रकारको हुन्छ। सबै पछि, चन्द्रमा को नाइट को छविमा उहाँले डन Quixote, जसबाट आफ्नो विजय acknowledging जित्यो .... तपाईं केवल आफ्नै नियम द्वारा एक madman फेंक गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई।
एक धार्मिक आंकडा जस्तो
निस्सन्देह, यस्तो अस्पष्ट अक्षर एक धार्मिक व्याख्या फेला पार्न सकेन। Cervantes 'उपन्यास मा डन Quixote को छवि, यस्तो पढाइ मूल पक्कै आशा थियो गर्नुभयो, तर समय यो शहीद र सेन्ट हेर्न थाले। यो के को लागि, जस्तो थियो? तथापि, साँच्चै नाइट-गुमराह को प्रोटोटाइप रूपमा, सत्य टाढा यस्तो बयान राम्रो मूर्ख (Ecclesiastical dogma पालन नगर्ने भएको सन्तहरू) बन्न सकेन।
तर, म Cervantes 'उपन्यास आए जहाँ Spaniards, अझ जाने - तिनीहरूले, मुख्य चरित्र, डन Quixote तुलना नयाँ करारका मुख्य पात्र संग। को उदास Countenance को नाइट तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र बलिदानको प्रदर्शन हेर्नुहोस्। कि यो सत्य हो - धेरै विवादास्पद मुद्दा, तर पाठ्यक्रम समानताहरु, सम्भव पाउन।
"डन Quixote" सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो - भन्ने protagonist को कसरी गहिरो छवि छ। सबै संस्करण मूल पाठ तल राखे यसलाई पढेर सही र छन्। सबैलाई उहाँले हेर्न चाहन्छ के मा देख्ने।
यी संस्करण प्रत्येक लागि, तपाईं एक अलग लेख लेख्न सक्छ। र के भन्छन् - पहिले नै धेरै लिखित गरिएको छ। तर कुनै पनि मामला मा डन Quixote को छवि - सबै भन्दा राम्रो मनसाय र मानिसको आकांक्षाओं को एक प्रकटीकरण। तिनीहरूलाई प्रत्येक, albeit छोटकरीमा माथि वर्णन।
हामी विश्लेषण र अन्तिम युरोपेली नाइट को जीवन को बाटो सोच्न मात्र जारी गर्न सक्छन्। उनले पागल, वा यदि ...?
Kozlovsky, मिखाइल Ivanovich: जीवनी, फोटो, मूर्तिहरु
रातो प्रेम प्रतीक!
सजिलै र कलात्मक कौशल पेन्सिल मा एक "पहिले" कसरी आकर्षित गर्न
दाऊदले Burliuk - रूसी Futurism को संस्थापक
इगोर Sakharov: चित्रहरू। साझेदारी प्रतिभा
Polkhov-Maidanskaya चित्रकला। काठ मा कला चित्रकला
को iPhone 5s मा इन्टरनेट कसरी सक्षम: सुझाव, सल्लाह, निर्देशन
यामाहा ग्रिज्ली 700 - kvadrozhizn
बालकनी डिजाइन: रोचक विचार र व्यावहारिक सल्लाह
सेन्ट Spyridon को चमत्कारी चिह्न। सेन्ट Spyridon को प्रतिमा - मूल्य
तपाईं नरमाइलो लाग्यो? यहाँ तपाईं अर्को5मिनेटमा के गर्न सक्नुहुन्छ छ
रोचक विचार र सिफारिसहरू: 17 वर्ष को लागि जन्मदिन उपहार
सूचकांक आर्थिक विश्लेषण विधि: आवेदन उदाहरण निर्धारण
प्रणाली सञ्चालन Windows मा रजस्ट्री के हो, र रजिस्ट्री को सफाई कसरी गर्न?
के अस्थमा संग एक आहार चाहिन्छ?